Octagon, edza mafungiro ako mukushandisa kwevhiki | IPhone nhau
Octagon, kuyedza mafungiro edu mukushandisa kwevhiki
604.800 masekondi adzokera kumashure, zvinoreva kuti Apple yakamutsidzira kukwidziridzwa kwayo kwevhiki kutipa chikumbiro mumwe mutambo wemubhadharo wakasununguka kwemazuva manomwe. Pane ino nguva, iyo app yevhiki es Zimbabwe Educational, mutambo usina magiraidhi akanaka kwazvo atinozofanira kudzora kufamba kwerudzi rwebhora kuitira kuti rirambe richienda pasina kuridonha.
Semamwe mimwe mitambo, mamamita ekutanga enzira yedu anozotibatsira kudzidza zvishoma mafambiro ebhora redu kana octagon, chimwe chinhu chatinowana inotsvedza kurudyi kana kuruboshwe zvinoenderana nedivi ratiri kuda kufamba. Zvine musoro, mamamita mashoma ekutanga achapa nzira kune vamwe kuti, pasina kupokana, vachakwanisa kuyedza tsinga dzedu (uye handinzwe kuda kukanda yangu iPhone kumadziro), tichifanirwa kuita kuti octagon yedu isvetuke uye kunyange svetuka panguva imwechete kuti utendeuke.
Octagon, hunyanzvi mutambo wemitsipa yesimbi
Octagon ndeimwe yemitambo iyo isina mifananidzo mikuru asi inogona kunakidza. Chinhu chakashata ndechekuti isu hatigone kutaura kuti ako ruzha Ndiri kuzohwina Hollywood Oscar asi, chero zvakadaro, ndinofungidzira kuti vavandudziri ndeyekuti mufananidzo pamwe nekurira kwaOctagon zvinosvika pamitsipa yedu, chimwe chinhu chandinofanira kureurura kuti vakabudirira mune yangu kesi ( yakawanda mhosva iri ne "mudiki muimbi" mumutambo).
Sezvauri kuona muvhidhiyo yapfuura, mumatanho epamberi zvakanyanya zvakaoma, saka Octagon mutambo kune avo vanoda kuyedza hunyanzvi hwavo. Sezvo isu tichigara tichitaura pamberi pekusimudzirwa chero ticha chengetedza, zviri nani kurodha mutambo izvozvi mutengo wayo wadonhera ku0, Uibatanidze neApple ID yedu uye wozofunga zvekuita nayo, haufunge?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Octagon, kuyedza mafungiro edu mukushandisa kwevhiki
TVShow Nguva yakagadziridzwa kutsiva iyo "Mabasa" tebhu
Mbudzi Simulator: Tsvina yeNzvimbo, mutambo mutsva nezve mbudzi ine mukurumbira inouya kuApp Store